रवि लामिछाने भन्नुहुन्छ : आइपरे यु’द्ध त ल’ड्न सकिन्छ, राजनीति त के हो र ! (भिडियो सहित) – List Khabar
Home / समाचार / रवि लामिछाने भन्नुहुन्छ : आइपरे यु’द्ध त ल’ड्न सकिन्छ, राजनीति त के हो र ! (भिडियो सहित)
admin2weeks ago समाचार Leaveacomment 55 Views
Previous आज जोर्डन संग भिड्दै नेपाल, के जित्ला त जोर्डनलाई ? कोच यसो भन्छन् । हेर्नुस् खेल ईतिहास ।
Next घले दम्पत्तिले नेपाललाई दिए तीन करोड रुपैयाँका स्वास्थ्य सामाग्री !